Idyasi yasebusika, Amadoda Idyasi yangaphandle, i Jacket engangenwa ngamanzi-Qinghua
Idyasi yobungqina ebandayo
Amadoda Phantsi / Idyasi edibeneyo
Amadoda ahamba ngeCotton / Windbreaker
Ingubo yabasetyhini ebandayo
Ijacket yabasetyhini ephantsi / yeCotton
Abafazi beCotton / i-Windbreaker yabasetyhini
Inkampani yethu iya kuba yimfuno zabathengi kunye noyilo lwempahla, itekhnoloji, ilaphu elidityanisiweyo, elihlala lisungulwa ngokuhambelana neempawu zabathengi eziyenzelwe uyilo lwempahla.
Singabantu inkampani eyomeleleyo yokuthengisa iimpahla, inkampani isebenza kwishishini lokurhweba kwamanye amazwe kangangeminyaka emininzi, ikakhulu kuphando kunye nophuhliso, imveliso, ulawulo lwamadoda amancinci efashoni kunye neentloko zabafazi. Inkampani yethu iya kuba yimfuno zabathengi kunye noyilo lwempahla, itekhnoloji, ilaphu elidityanisiweyo, elihlala lisungulwa ngokuhambelana neempawu zabathengi eziyile zokuyilwa kwempahla, ngokweemfuno zokwenyani zeendwendwe ezinokuthi zilungelelanise (ezinje ngesitayile, itekhnoloji ekhethekileyo, iimfuno zexabiso ... )…
Sineqela lezobuchwephesha elomeleleyo kushishino, amashumi eminyaka yamava obuchule, inqanaba loyilo olugqwesileyo.
Inkampani igxile kwimveliso ekumgangatho ophezulu, amandla obuchwephesha, uphuhliso olomeleleyo, iinkonzo ezilungileyo zobugcisa.
Ulondolozo lwemihla ngemihla lweBhatyi ephantsi
1, Ukucoca okomileyo ibhatyi esezantsi inokucocwa xa yomisiwe. Ingacocwa xa ibhatyi engaphantsi inamabala amabi, kodwa kufuneka ithunyelwe kwindawo yokucoca eyomileyo ukuze icoceke, ukuthintela ukonakala kwebhatyi ebangelwe ziinkqubo zokucoca ezomeleleyo okanye ezingafanelekanga ...
Iimpawu zoHlobo olwahlukileyo lweeJacket zabasetyhini
Uhlobo lwe-A Uhlobo lweProfayili yempahla lubonakaliswa ngengubo kunye nengubo ngaphandle kwesinqe, okanye umgca wesinqe esincinci, kunye nomphetho obanzi. Ingabonisa nje umzimba ongentla okanye isinqe, kodwa ikwasibekele isisu sakho, ngokufezekisa ifuthe lokunciphisa, ukufihla iziphene zomzimba. Isishwankathelo silula ...
Ukubaluleka kokwenza ulwenziwo
Izinto eziluncedo ezenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi: 1. Ixabiso elinokukhethwa: abathengi banokuziguqula izitayile ngexabiso elingqinelanayo ngokwamaqela abo abathengi, ukuze bayiqonde ngcono indawo yenzuzo. 2. Ilaphu ozikhethelayo: isiko linokukhetha ngokukhululekileyo kwaye ngokuguqukayo kwilaphu elisetyenziswe ngu ...
Ifowuni: +86 13522355655
Imeyile: katya777 @ aliyun.com / guoyuan4018 @ 163.com
Idilesi: Igumbi 3082, Tianya Clothing Market, No. 2 Yabao Road, Chaoyang District, Beijing, China